ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖာဒီနန်မားကို့စ်အနိုင်ရဟု ကနဦးမဲရလဒ်တွင် ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သူ ဖာဒီနန်မားကို့စ်ဂျူနီယာအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မနီလာ ၊ မေ ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် အသက် ၆၄ နှစ်အရွယ် ဖာဒီနန်မားကို့စ်ဂျူနီယာသည် ၎င်း၏ အနီးကပ်ပြိုင်ဘက် အသက် ၅၇ နှစ်အရွယ် လက်ရှိဒုတိယသမ္မတ မာရီယာလီယိုနာရော်ဘရီဒိုအား မဲရေတွက်မှု ၈၃.၁ ရာခိုင်နှုန်းပြီးချိန်တွင် တရားဝင်အတည်မပြုရသေးသော ရလဒ်များအရ အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။နောက်ဆုံးမဲရေတွက်ပြီးချိန်တွင် မားကို့စ်သည် ထောက်ခံမဲ ၂၆,၆၈၁,၄၁၄ မဲဖြင့် ထောက်ခံမဲ ၁၂,၇၃၆,၆၄၄ မဲ ရရှိထားသော အနီးကပ်ပြိုင်ဘက် ရော်ဘရီဒိုကို ဦးဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုံးဘုံး (Bongbong) ဟူသော နာမည်ဖြင့်လူသိများထင်ရှားသည့် မားကို့စ်သည် ဗီဒီယိုရုပ်သံမှတဆင့် “ ဒီကာလရှည်တစ်လျှောက်လုံးမှာ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေအတွက် သိပ်ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်အချို့မှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ ရှိနေပေးခဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့အတွက် ခင်ဗျားတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ် ၊ အပြင်မှာတော့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ၊ ပြိုင်ဘက်အုပ်စုတွေ ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ မဲပေးခဲ့ကြပါတယ် ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မားကို့စ်က နောက်ဆုံးမဲရလဒ်ရေတွက်ပြီးချိန်ထိ နိုးနိုးကြားကြားရှိကြရန် ထောက်ခံသူများအား တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး မဲရေတွက်မှုသည် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဆက်လက် ရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ “ မဲရေတွက်တာ မပြီးသေးပါဘူး ၊ ရာနှုန်းပြည့် မဲရေတွက်ပြီးတဲ့အချိန် ထိ စောင့်ဆိုင်းကြတာပေါ့ ။ ကျွန်တော်တို့နိုးနိုးကြားကြား ရှိဖို့လိုပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မားကို့စ်နှင့်အတူ တွဲဖက်၍ ဒုတိယသမ္မတနေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူ ၊ မကြာမီရာထူးမှထွက်ခွာရတော့မည့် လက်ရှိသမ္မတ ဒူတာတေး၏ သမီးလည်းဖြစ်သူ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ဆာရာဒူတာတေး-ကာပီယိုသည် မဲရေတွက်မှု ၈၃.၁ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးချိန်တွင် ထောက်ခံမဲ ၂၆,၇၀၁,၉၅၁ မဲဖြင့် ဒုတိယသမ္မတရာထူးအတွက် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် မဲရေတွက်မှုကို မေ ၁၀ ရက်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တရားဝင်မဲရလဒ်များကိုမူ ထုတ်ပြန်ပေးအုံးမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ ကော်မရှင်အနေဖြင့် အထက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ မဲအရေအတွက်ကိုသာ ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ပြန်လည်စတင်မည့် မေ ၂၃ ရက်တွင် သမ္မတ နှင့် ဒုတိယသမ္မတ မဲရလဒ်များကို ကွန်ဂရက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် သမ္မတသစ်တစ်ဦး ၊ ဒုတိယသမ္မတသစ်တစ်ဦး ၊ ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်အမတ် ၂၄ နေရာအတွက် ၁၂ ဦး နှင့် အောက်လွှတ်တော်အမတ် ၃၀၀ ကျော်တို့ကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အချက်အလက်အရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးရန် မှတ်ပုံတင်ထားသူ ၆၅.၇ သန်းရှိကြောင်း နှင့် နိုင်ငံအဆင့် နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးနေရာပေါင်း ၁၈,၀၀၀ ကျော်ကို မဲပေးရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
MANILA, May 10 (Xinhua) — Ferdinand Marcos Jr., 64, won Monday’s presidential election over his main rival, incumbent Vice President Maria Leonor Robredo, 57, according to the 83.1 percent of unofficial votes counted.
The latest tally said Marcos garnered 26,681,414 votes over Robredo’s 12,736,644.
Inavideo message, Marcos, popularly knowns as Bongbong, thanked “all of those who have been with us in this long, sometimes very difficult journey for the last months.”
“I want to thank you for all you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders, that cast their lot with us,” he said.
However, Marcos urged his supporters to be vigilant until the last vote is counted, saying the counting is still underway. “The counting is not over yet. Let’s wait for the full counting to finish 100 percent. We need to be vigilant,” he added.
Marcos’ running mate, Sara Duterte-Carpio, the 43-year-old daughter of outgoing President Rodrigo Duterte, also won the vice presidential race, garnering 26,701,951 votes from the 83.1 percent counted votes.
The Commission on Elections, which will start counting the votes on Tuesday, has yet to release the official tally of the election. The poll body will only canvass votes of the senatorial candidates.
Filipinos voted to electanew president,anew vice president, 12 of the 24-seat Senate, and over 300 members of the House of Representatives.
Poll body data showed that 65.7 million voters registered for the 2022 elections. Over 18,000 national and local positions are up for grabs. Enditem
သမ္မတရှီက တရုတ်လူငယ်များသည် အိပ်မက်များကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်အကောင်အထည်ဖော်ရန် တောက်ပသောမျှော်လင့်ချက်များ ရှိကြောင်း ပြောကြား